RASMI: Kooxda Arsenal oo shaacisay Lambarrada ay u xiran doonaan saxiixyadeeda cusub ee Cedric Soares & Pablo Mari – Gool FM
RASMI: Kooxda Arsenal oo shaacisay Lambarrada ay u xiran doonaan saxiixyadeeda cusub ee Cedric Soares & Pablo Mari
Haaruun January 31, 2020
(London) 31 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa si rasmi ah u xaqiijisay lambarrada ay u qaadan doonaan saxiixyadeeda cusub ee Pablo Mari iyo midka ay maanta ku dhawaaqday inay la wareegtay ee Cedric Soares.
Gunners waxa ay xaqiijisay inay laacibkii ay maanta ku dhawaaqday inay soo xero-gelisay ee Cedric Soares uu u qaadan doono maaliyadda lambarka 17-aad, halka Pablo Mari uu Arsenal u xiran doono lambarka 22-aad.
Arsenal ayaa dhammaystirtay saxiixa Cedric Soares kaasoo ay kala soo wareegeen Southampton, daafacan garabka midig ayaana heshiis amaah ah ugu soo dhaqaaqay Emirates illaa dhammadka xilli ciyaareedka.
Marka uu heshiiskiisa Saints ka dhammaado, Kooxda Arsenal ayaa qiyaar u haysata inay xiddigan xulka qaranka Portugal si joogto ah ula wareegto. isla markaana ay ka saxiixato heshiis afar sanadood ah.
Sidoo kale kooxda Arsenal ayaa la saxiixatay Pablo Mari, daafacaan oo ay isagana amaah kaga soo qaateen Naadiga Flamengo ayaa noqday saxiixii ugu horreeyey ee Tababare Arteta, waxaana ay qiyaar u haystaan inay wada iibsan karaan.
🚨 SHIRT NUMBER ANNOUNCEMENT 🚨
👉 https://t.co/LlIpzkYTa3 pic.twitter.com/84NqTI2b2U
Man United oo qorsheeneysa in badelka Rashford ay ka dhigato xiddig hore oo Liverpool ah
Guardiola & Klopp oo hoggaaminaya Tababareyaasha u sharraxan abaal-marinta macallinka bisha Janaayo ugu fiicnaa Premier League